Okuyisisekelo - Khwezi Trade
Ayini ama-Currency CFD's (Forex)?
Ngisuke ngenzani uma ngihweba nge-Currency CFD's (Forex)?
Igama elithi Currency CFD's (Forex) isifushaniso esivame ukusetshenziswa senkulumo ethi "foreign exchange" ngokuvamile isetshenziselwa ukuchaza ukuhweba emakethe yamazwe angaphandle okwenziwa abatshali zimali nabagaqela izimo zomnotho.
Ngokwesibonelo, ake ucabange ngesimo lapho i-dollar laseMelika kulindeleke ukuba amandla alo abe phansi uma liqhathaniswa ne-euro. Kulesi simo, umhwebi we-Currency CFD's (Forex) uzodayisa ama-dollar bese ethenga ama-euro. Uma i-euro liba namandla, amandla alo okuthenga am-dollar asenyukile. Manje umuntu owenza uhwebo usengakwazi ukuphinde athenge ama-dollar aminingi kunalawo abenawo ekuqaleni, ngaleyo ndlela enze inzuzo.
Lokhu kuyefana nalokho okwenzeka lapho kwenziwa uhwebo ngesitokwe. Umuntu owenza uhwebo lwesitokwe uyaye athenge isitokwe uma ecabanga ukuthi amanani aso entengo azokwenyuka esikhathini esizayo bese esidayisa isitokwe uma ecababanga ukuthi amanani aso entengo azokwehla esikhathini esizayo. Ngokufanayo, umuntu ohweba nge-Currency CFD's (Forex) uzothenga imali ethile uma elindele ukuthi amandla ayo azokwenyuka esikhathini esizayo bese eyidayisa leyo mali uma ebona ukuthi amandla ayo azokwehla.
Liyini inani lokuhweba ngemali?
Imakethe yokuhwebelana namazwe angaphandle, (foreign exchange) iyinto yomhlaba wonke, ayinayo indawo eyodwa inquma inani elilingene lamandla ezimali. Ngokungefani nezinye izimakethe akukho ndawo eyodwa lapho kufanele kufakwe khona imali noma kwenziwe uhwebo. Kunalokho, lezi zimali okushintshwana ngazo zenziwa yizimakethe ezihlukahlukene ezindaweni eziningana. Akuvamile ukuthi izinhlobo ezimbili zezimali zibe namandla afanayo futhi akuvamile nokuba izinhlobo ezimbili zemali zilondoloze amandla athile isikhathi esijana impela. Ekuhwebeni nge-Currency CFD's (Forex), amanani okuhweba ngezimali ezimbili ahlale eshintsha.
Ngokwesibonelo, ngo-January 3, 2011, u-1 euro wawulingana no-$1.33. Ngo-May 3, 2011, u-1 euro wase ulingana no-$1.48. Amandla e-euro akhula ngamaphesenti angu-10% uma liqhathaniswa ne-dollar laseMelika phakathi nalesi sikhathi.
Kungani kufanele ushintshe izimali zangaphandle?
Izimali zidayiswa emakethe evulekile njengesitokwe, amabond, amakhompyutha, izimoto kanye nezinye izinto ezingi ezinhle. Amandla emali ayashintshashintsha njengoba ukutholakala kwayo nokufunwa kwayo kushintsha, njengoba kunjalo nangazo zonke ezinye izinto.
Ukwanda kwezinga etholakala ngayo leyo mali noma ukuncipha kwezinga efunwa ngalo kungenza amandla aleyo mali anciphe.
Ukuncipha kwezinga etholakala ngalo leyo mali noma ukwanda kwezinga efunwa ngalo kungenza amandla aleyo mali akhuphuke.
Inzuzo enkulu yokuhweba nge-Currency CFD's (Forex) ukuthi ungathenga noma uthengise noma iyiphi imali, nganoma yisiphi isikhathi, kuye ngemali ekhona. Ngakho, uma ucabanga ukuthi amandla e-Euro azoncipha, ungawadayisa ama-Euro akho bese uthenga ama-dollar (uthengise i-EUR/USD). Uma ucabanga ukuthi inani legolide lizokhuphuka, ngokuhlola indlela ebelilokhu liqhuba ngayo esikhathini esingaphambili ungathenga i-dollar lase-Australia bese uthenga i-dollar laseMelika (thenga i-AUD/USD).
Lokhu kusho nokuthi eqinisweni ayikho into okuthiwa "ukuwa kwamasheya," ngomqondo obanzi. Ungakwazi ukwenza inzuzo (noma ulahlekelwe yimali) lapho imakethe yehla noma ikhuphuka.
Kungani Kufanele Uhwebe Nge-Currency CFD's (Forex)?
Ukuhweba nge-Currency CFD's (Forex) kuyi-inthanethi sekube yinto ethandwa kakhulu kusukela eshumini leminyaka eledlule ngoba kunika abezohwebo amathuba amaningana:
I-currency CFD's (Forex) akwenzeki kuba namahora evalwe ngawo
Ukuhweba kuyaqhubeka kuwo wonke umhlaba ngezikhathi zokusebenza emazweni ahlukahlukene. Ngakho ungakwazi ukuhweba ngezimali ezinkulu nganoma yisiphi isikhathi, amahora angu-24 ngosuku. Ngenxa yokuthi awekho amahora aqondile okuhweba ngemali, kusho ukuthi kuhlale kunokuthile okwenzekayo nganoma yisiphi isikhathi sosuku noma sobusuku.1
Thenga futhi uthengise
Ngokungafani nezinye izimakethe zemali, lapho ungeke ukwazi khona ukuthenga imali bese uphinde uyidayisa ngokushesha, akukho mingcele ekuthengeni nokuthengisa imali. Uma nje ucabanga ukuthi amandla emali azokhuphuka, yithenge. Uma ucabanga ukuthi azokwehla, yithengise. Lokhu kusho ukuthi ayikho into okuthiwa “ukuwa kwamasheya” kwa-Currency CFD's (Forex) – ungakwazi ukwenza inzuzo (noma ulahlekelwe yimali) nganoma yisiphi isikhathi.
Izindleko eziphansi zokuhweba
Ama-akhawunti amaningi eCurrency CFD's (Forex) ahweba ngaphandle kokuba kukhokhelwe omunye umuntu oseceleni futhi akukho zindleko eziphakeme zokushintshwa kwemali noma ilayisensi yedata. Izindleko zokuhweba zinqunywa yizindleko zokuthenga kanye nenani imali ethengiswa ngalo, okuhlale kuboniswa kuskrini sakho ohwebela kuso.
Ukutholakala kwemali okungenakuqhathaniswa
Ngenxa yokuthi i-Currency CFD's (Forex) iyimakethe enemali engu-$4 trillion ngosuku, futhi ukuhweba kugxile ezimalini zamazwe ambalwa, kuhlale kunabantu abaningi abasuke behweba kulezi zimakethe. Lokhu kwenza kube lula kakhulu ukungena nokuphuma kwezohwebo nganoma yisiphi isikhathi, ngisho nangamanani aphakeme.
Ngenxa yobuningi bemali etholakalayo ezimakethe zeCurrency CFD's (Forex), ungakwazi ukuhweba ngeCurrency CFD's (Forex) usebenzisa imali eyisikweletu esiphawulekayo (into engaba ngu-200:1). Lokhu kungakuvumela ukuba uthathe amathuba ngisho nangezinguquko ezincane ezenzeka emakethe. Yiqiniso ukuthi imalimboleko yinhle yimbi, ngoba iwandisa kakhulu amathuba okulahlekelwa kanye nawokwenza inzuzo.
Ukungena ezimakethe zomhlaba
Njengoba umhlaba uya ngokuya ubumbana, abatshali zimali bazingela amathuba nomaphi lapho etholakala khona. Uma ufuna ukwenaba utshale izimali kwelinye izwe (noma uthenge uthengise!), iCurrency CFD's (Forex) iyindlela elula yokulunguza emakethe yomhlaba ngesikhathi esifanayo ube ugwema izinguquko ezingalindelekile njengemithetho yokuvikela elawula ezangaphandle kanye nombiko wezimali othunyelwa ngezinye izilimi.
1 Kuye ngezimali ezisemakethe, ideski lezohwebo livulwa phakathi kuka-5:00 PM ET kanye no-5:15 PM ET. Ideski lezokuhweba livalwa ngoLwesihlanu ngo-4:55 PM ET. Izicelo ezifakwe ngaphambi kwaleso sikhathi zingase zigcwalise kuze kube ngu-5 pm (ET).
Ukufunda ukuhweba emakethe entsha kufana nokufunda ulimi olusha. Kulula uma kunamagama amaningi owaziyo futhi wazi izinto eziyisisekelo, imiqondo nemibono ethile eyinhloko.
Iyini ngempela i-currency CFD's (iFOREX)?
I-Currency CFD's (Forex) iyisifushaniso esivame ukusetshenziswa sokuhweba ngaphandle noma i-“foreign exchange". Ngokuyinhloko ichaza ukuthengwa nokudayiswa kwemali ezimakethe zomhlaba, ikakhulu okwenziwa abatshali zimali kanye nabahwebi abanethemba lokuthi amandla aleyo mali azokwenyuka. Inkulumo ejwayelekile ethi, "thenga lapho amanani ephansi uthengise uma esekhuphukile", ngokuqinisekile isebenza ekuhwebeni ngezimali. Umuntu ohweba nge-Currency CFD's (Forex) uthenga izimali eziphansi ngamanani bese ethengisa izimali ezinamanani aphakeme kakhulu; njengoba nje umuntu ohweba ngesitokwe ethenga isitokwe lapho sehlile bese esidayisa lapho amanani aso esephakeme kakhulu.
Uwafunda kanjani amanani amandla emali?
Ngenxa yokuthi uhlale uqhathanisa izimali, iCurrency CFD's (Forex) ihlale iveza izimali ngazimbili ngokuziqhathanisa. Lokhu kungaqale kubonakale kudida ekuqaleni, kodwa empeleni kuyinto elula nje. Ngokwesibonelo, i-EUR/USD elithi 1.4022 libonisa ukuthi i-euro elilodwa (EUR) limalini uma ulithenga nge-dollar laseMelika (USD).
I-pip into oyisebenzisela ukubala inzuzo noma ukulahlekelwa. Izimali eziningi, ngaphandle kwe-yen yaseJapane, zicashunwa kusetshenziswa izinombolo ezine ngemva kwechashaza. Inombolo yesine ngemva kwechashaza (okuyingxenye ka-100 ngaphansi kwesenti) iyilokho empeleni umuntu akubhekayo ukuze abale ama"pip". Njalo lapho kuba nomnyakazo kusuke kunyakaze ipip eyodwa. Ngokwesibonelo, uma i-EUR/USD lenyuka lisuka ku-1.4022 liya ku-1.4027, lelo EUR/USD lisuke linyuke ngama-pip angu-5.
Njengoba kuke kwachazwa ngaphambili, lonke uhwebo lwenziwa kusetshenziswa imali etshelekiwe. Lokhu kukuvumela ukuba usebenzise imalimboleko. Imali mboleko eku-200:1 ikuvumela ukuba ukwazi ukuhweba emakethe ngo-$1,000 ngokubekela eceleni imali eyidiphosithi yokuvikela engu-$5 kuphela. Lokhu kusho ukuthi ngisho nalapho kunomyakazo omncane wamandla emali ezimakethe ungasizakala ngokulawula imali ethe xaxa emakethe kunaleyo ngempela onayo kuyi-akhawunti yakho. Ngakolunye uhlangothi le malimboleko, ingakulahlekisela kakhulu. Ukuhweba ngezimali ezimakethe zomhlaba nganoma yiliphi inani lemalimboleko kungase kubafanelani nabo bonke abatshali zimali.
Inani lemali eliqondile okuyaye kudingeke ukuba uyibekele eceleni ukuze ubambe indawo ibizwa ngokuthi yi-margin. Imargin ingase ibhekwe njengemali oyethembayo eyideposithi edingekayo ukuthi uhlale unesikhala sokuhweba. Lena akuyona imali oyikhokhiswayo noma izindleko zokwenza uhwebo, imane nje iyimali eyingxenye yaleyo ekuyi-akhawunti yakho ebekelwe eceleni ngenjongo yokuba ibe yideposithi ye-margin yakho.
Izindleko Zokusabalala/Nokuhweba (Spread/Trade)
Izindleko zokusabalala/nokuhweba zibalwa ngokubheka umehluko phakathi kwamanani okuThenga Nokudayisa lapho kwenziwa khona uhwebo.
Sicela ubheke ngezansi isibonelo sokuhweba nge-EUR/USD.
Izindleko ze-Spread/Trade: 2.5 pips
Thenga u-0.01 usayizi wenkontileka, u-1 pip ulingana no-R1.30
Izindleko zokuhweba: R3.25
Ukusabalala kuyahluka kuye ngamathuluzi, isimo sezimakethe, amanani okuhweba, imithetho elawulayo noma ukungenela kwepolitiki futhi lokhu okungenhla akunakuchazwa ngokuthi kuyibonisa amanani ohwebo. Zonke izindleko ze-spread / trade zizovela ewindini Lokubuka Izimakethe kuplatifomu iMetaTrader 4.
Ama-spread kungaboniswana ngawo kuye ngenani lohwebo olwenziwe kanye nemali efakiwe eyideposithi.